Usongela i-Al Ahly umqeqeshi weDowns - Ilanga News
Home Ezemidlalo Usongela i-Al Ahly umqeqeshi weDowns
Usongela i-Al Ahly umqeqeshi weDowns
UMngqithi uthi akukapheli ngabo koweCaf Champions League
UMQEQESHI weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi (okwesokudla), uthi i-AL Ahly ebehlule ngo-2-0 emlenzeni wokuqala we-quarter final
yeCaf Champions League kumele igawule ibheke ngoba bayifihlele induku emqubeni emlenzeni wesibili ngoMgqibelo. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEP
UMQEQESHI weMamelodi Sundowns usongela ka-nzima umqeqeshi wakhe wakudala ngebhola lobu-gwala.
IDowns izokwamukela i-Al Ahly yase-Egypt emlenzeni wesibili we-quarter final yeCaf Champions League ngoMgqibelo ngo-15h00 eLucas Moripe Stadium, e-Atteri-dgeville.
Emlenzeni wokuqala obuse-Egypt iDowns iguqe ngo-2-0.
UManqoba “TV” Mngqithi ongu-mqeqeshi weDowns uthi yize amagoli amabili engumqansa kodwa akuphelile ngabo.
Ube esesongela uPitso “Jingles” Mosimane ongumqeqeshi we-Al Ahly, abengumsizi wakhe iminyaka kwiDowns ukuthi uma ezoqhu-beka nokuzodlala ibhola lobugwala nakulo mdlalo, kukhona okusina kumjeqeza.
UMngqithi ukhale kabi ngebhola elidlalwe yi-Al Ahly emlenzeni wokuqala, wathi kumethusile ukuyibona ihleli emuva ekubeni idlalela ekhaya.
“Indaba enkulu esiyibhekile kulo mdlalo wukuthi bahlele ukudlala kanjani ePitoli.
“Uma bezodlala ngale ndlela abadlale ngayo eCairo kukhona okusina kubajeqeza, ngeke kuba-thathe isikhathi eside ukuthi ba-bheke phezulu.
“Angikholwa ukuthi bamaka kahle emuva, nasebhokisini labo banqwabelana kakhulu okwenze sabacindezela ngesiwombe sesibili emdlalweni owedlule.
“Ngesiwombe sesibili abazange basicindezele nhlobo.
“Namanje ngisasho abakwazi ukumaka emuva kodwa bayingozi uma behlasela abalibheki ithuba abalitholayo.
“Kodwa ngeke bakwazi ukume-lana nemizuzu engu-90 kulo mdlalo,” kusho uMngqithi.
Previous articleKuboshwe umngcwabi ‘ontshontshe’ ibhokisi
Next articleUfikelwa yizinyembezi ngezinselelo zebhola